एक माग्नेले छल्ले | Apg29
तपाईं आफैलाई झुक्काएका र छल्न गरौं गर्छन्?&nb
र हामी यो साँच्चै कल र गाह्रो भएका एक माग्नेले छ कि कसरी थाहा छ? शायद यो एक राम्रो लिग पछि छ।
हिजो प्रस्तुत नै बिना मलाई एक रोमानियन मानिस भनिन्छ। उहाँले तुरुन्तै भङ्ग स्विडिश कुरा सुरु, तर अझै पनि एकदम खाली गर्नुहोस्। शायद उहाँले कागज गर्न पूर्व पढ्नुहोस्।
जब कसैले आफ्नो नाम भन्छ, म यसलाई जो छ सोध्नुहोस्। तर उहाँले जवाफ तर कुरा जारी थिएन। उहाँले तिनीहरू क्यान्सर देखि बिरामी थिए र यो साँच्चै कठिन थियो, आफ्नो परिवारको बारेमा sob कथाहरू बताउन थाले।
म चाँडै आफ्नो मामला मुद्रा को लागि माग्छु थियो बुझे। म त्यो भनिन्छ के एक पटक आग्रह र म न बुझे न त उच्चारण सक्छ जो एउटा नाम एउटा तनावपूर्ण अस्पष्ट प्रतिक्रिया पायो। उहाँले बस्ने म आग्रह र भनिएको थियो रोमानिया।
"तपाईं झूट हुनुहुन्छ!"
तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ को पाठ्यक्रम स्विडिश, म भने, तर उहाँले रोमानिया थियो। तर सेल फोन उहाँले स्वीडेन ले कल थियो प्रकट गर्नुभयो। म भने स्वीडेन ले कल, र जारी: तपाईं झूट हुनुहुन्छ! त्यसपछि म अलविदा भन्यो र काट।
थियो मानिस उहाँले मसीही थियो, तर मैले पहिले नै हाम्रो स्टोर बाहिर बसिरहेका रोमानियाली माग्नेहरूलाई तिनीहरूले मसीहीहरू र रोमानिया विभिन्न चर्च को सदस्य थिए भने जहाँ थाहा छ, तर यसलाई जाँच गर्दा यो sued कहिल्यै भन्नुभयो।
पाठ्यक्रम, तपाईं चाहनुहुन्छ भने, गरिब र आवश्यकता भएका, तर नीलो-आँखाहरू र अनुभवहीन हुन छैन, र अनुमति आफूलाई मसीही मानिसहरूलाई मदत तपाईं मसीही र ईश्वरीय जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ बस किनभने प्रयोग गर्न।
वास्तवमा, यो राम्रो बिन्ती गर्नु (तिनीहरूलाई मूर्ख?) मुद्रा मा येशूले विश्वास ख्रीष्टियनहरूले professing घर कल गर्न शांत गर्नुपर्छ। तिनीहरूले शायद सोभ्को मसीहीहरूले फेला पार्न नेट वरिपरि surfed गर्नुभएको छ। म पहिले माग्नेहरूलाई को गडबड प्राप्त गरेका छौं। र हामी यो साँच्चै कल र गाह्रो भएका एक माग्नेले छ कि कसरी थाहा छ? शायद यो एक राम्रो लिग पछि छ।
पहिले, म एक कठिन समय telemarketers मलाई कुराहरूमा foist गर्न चाहने कुनै भन्दै थियो। म सधैं कमसल आफ्नो उत्पादनहरु संसारको मौका म सिर्फ सक्दैन मिस हो कि आफ्नो मनोवृत्ति म मूलतः नबुझेका मूर्ख हुँ भनी हुँदा महसुस गरे। र म उक्साए र किनेको तिनीहरूलाई एक, म पछि धोखा महसुस होस्।
तर अब म मलाई चासो छैन कि सीधा कुनै जमीन भन्छन्। तर तिनीहरूले मलाई सम्भ्काउनु प्रयास कुरा गर्न तैपनि जारी, म दृढ तर अनुकूल बिदा र झुन्डियो अप तुरुन्तै रोक्न। म तिनीहरूलाई एक मौका दिन छैन।
पहिले, यो मलाई नराम्रो अन्तस्करण दिनुभएको थियो, तर अब म यसलाई जो शोषण र दुःख गरिनेछ म छ भनेर बुझ्न किनभने। म बलियो बन्न र कुरा यस प्रकारको गर्न खडा गर्न एक धेरै अधिक भरोसा छ।
त्यसैले, तपाईं कुनै भन्न हिम्मत गर्नुपर्छ। गर्छन् जो कोहीले बनाउन के तपाईं कुनै भन्न जब inferiority जटिल महसुस गरौं छैन। ठूलो विश्वस्तता र साहसी भई आफ्नो निर्णय दह्रो। गर्छन् प्रयोग प्राप्त छैन। र तपाईं मसीही तपाईं कुनै भन्न भने, मसीही कम बन्न गर्दैन छन्।
तिनीहरूलाई येशूको दिन!
तर हामी तिनीहरूलाई कसरी पैसा लागि भीख माँग के गर्छन्? पहिलो स्थानमा हामी तिनीहरूले उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्छन् र सुरक्षित र सदाको लागि सुरक्षित हुन भनेर तिनीहरूलाई येशूको सुसमाचार दिनुपर्छ। अन्यथा, तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा केही अर्डर कहिल्यै प्राप्त हुनेछ।
पहिलो स्थानमा, हामी माग्नेहरूलाई येशूले दिनेछु! म फेरि भन्न: पहिलो स्थानमा, हामी माग्नेहरूलाई येशूले दिनेछु! त्यसपछि मात्र तिनीहरूले beggary टाढा विच्छेद गर्न! त्यसपछि तपाईंले तिनीहरूलाई सामाजिक मद्दत गर्न सक्छ।
येशूले त्यसपछि सामाजिक सहायता काम गरेन छैन! त्यसैले, तपाईं पहिलो तिनीहरूलाई येशू सामाजिक-सहायता दिन र त्यसपछि गर्नुपर्छ!